Donald Crisp 1831: Ludvig Nobel - mpiantoka, injeniera, mpanao soa ho anny hafa 0604: Fatima Zahra - 1835: Giosuè Carducci - mpanoratra, Poeta, Mpanao gazety 1863: Hugo Henneberg - mpahaisiansan-javaboahary, mpaka sary Geoffrey de Havilland - injeniera, mpiantoka 1803: John George Howard - injeniera sivily, injeniera 1813: Charles Armengaud - injeniera 1801: George Biddell Airy - mpanao matematika, mpahaikintana, mpahay fizika 1849: John Hopkinson - mpahay fizika, injeniera, mpahay siansa 1848: Friedrich Ernst Dorn - mpahay fizika 1882 1893: Allen Shenstone - mpahay fizika, injeniera Otto ...
1832: Colin Archer - injeniera 1795: Gabriel Lamé - mpanao matematika, mpahay fizika, injeniera 1890: Lucien Gamblin - mpilalao baolina kitra, Mpanao gazety 1876: William Harry Evans - injeniera 1889: James Whale - talen-koronantsary, mpanoratra senariô Phil Jutzi 1792: James Beaumont Neilson - mpamorona, injeniera Brian Robertson 1822: Gregor Mendel - mpanao matematika 1755: Gaspard de Prony - mpanao matematika, injeniera, mpahay fizika, mpanao politika, mpahay mozika 1887: Gustav Ludwig Hertz - mpahay fizika 1815: Ernest Goüin - injeniera sivily, injeniera 1895: Pavel Soukhoï - injeniera ...
1877: Arthur Werner - mpanao politika, injeniera 1858: Émile Durkheim - filôzôfy, mpahay fiarahamonina 1641: Robert Sibbald - Dokotera, mpahaisiansan-javaboahary 1896 1874: Johannes Stark - mpahay fizika Nikolaï Semionov - mpahay fizika 1869: Emilio Almansi - mpahay fizika, mpanao matematika, injeniera 1810: Charles Frodsham - injeniera 1781: Giuseppe Antonio Borgnis - injeniera 1883: Stanley Bruce - mpanao politika 1707: Leonhard Euler - mpanao matematika, mpahay fizika, mpahay mozika Gerhard Fieseler 1886: Frank Adcock - mpanao matematika, injeniera 1452: Léonard de Vinci - injeniera, mp ...
Ny aratra dia vokatry ny fisiana sy fihetsehanny elekitrôna aminny toerana na zavatra iray. Ny aratra no mahatonga ny varatra, kianjanaratra, sy ny herinaratra fampiasa andavanandro aminny fitaovana toy ny jiro, radiô, milina fikajiana, sy sisa tsy voatanisa. Ny tondronny aratra dia nanomboka fantatra taminny taonjato faha 17, ny fifehezana ny aratra dia nafahana nanombohana ny revôlisiôna ara-taozava-baventy faharoa taminny taonjato faha 19. Ankehitriny, hita na aiza na aiza ny aratra eny aminny firenena mandroso: avy aminny loharanon-angôvo, ny aratra aminizao tontolo izao dia angôvo amp ...
Ny fetran’i Chandrasekhar na koa lanjan’i Chandrasekhar dia lanja farafahabetsaky ny kintana sahozanina fotsy. Mitondra ny anaran’i astrôfizisianina Subrahmanyan Chandasekhar ny ilay fetra satria izy no nanatsara ny fikajiana izany tamin’izy mbola sivy ambin’ny folo taona. Tsy noraharahian’ny fikambanan’ny siantifika izany fetra izany satria mety hametra ny fisian’ny lavaka mainty ilay izy, zavatra izay noheverina fa tsy afaka mitranga tamin’izany fotoana izany. Ny sahozanina fotsy, dia mitohitra amin’ny firodanana ara-tsintona amin’ny alalan’ny tsindry avy amin’ny fanerena tsy hita mason’ ...
I Galileo Galilei teraka taminny 15 Febraory 1564 tany Pisa, ary maty ny 4 Janoary 1642 tany Firenze dia dokotera ary mpahay hainkintana, fiziky ary filôzôfy italiana izay nalaza taminny teôria navoakany mikasika ny fisianny Masoandro eo afovoanIzao Tontolo Izao ary ny fihodinanny Tany manodidinny Masoandro. Ny vokatriazany teôria izany - izay manova lalina ny fomba fijery ekenny Fiangonana Katôlika taminizany fotoana izany - dia antsoana revôlisiôna kopernisiana.
Perseus no anaranny kaody anny mpitsikilo atomika sovietika hypothètique izay, raha tena izy, dia mety nanitsakitsaka ny filaminam-pirenena amerikana taminny fidirana an-tsokosoko tao aminny Laboratoara Los Alamos National nandritra ny fampandrosoana ny Tetikasa Manhattan, ary vokatrizany dia mety ho fitaovana lehibe ho anny Sovietika tao aminny fampandrosoana ny fitaovam-piadiana niokleary. Eo aminireo mpikaroka momba anio lohahevitra io dia misy ny marimaritra iraisana fa tsy nisy velively i Perseus ary namorona faharanitan-tsaina sovietika mihitsy.
Ny rianaratra dia fivoizan’ny lanjan-kerinaratra, anaty zavatra mampita aratra. Ny hery elektrômanetika no manery ireo fivoizana ireo izay foton’ny aratra. a) Ireo karazan-jaka mampita aratra Ny vainga metaly, na madio na mifangaro no fantatra fa mpampita aratra. Ny volafotsy no metaly fatra-mpampita aratra avo lenta indrindra. Ny varahina no metaly ampiasaina anaovana tady elektrika ary ny aliominiôma kosa ho anny tamba-tady elektrika, noho ny hatsàranny fampitàna aratra azo aminireo,ary koa noho ny vidinireo metaly ireo.Anatin ireny solosaina avo lenta ireny dia ampisaina ny volamena. Mi ...